ONFL: Wey jirta xan ku saabsan faragelinta shirkeena ee madaxda dowlad deegaanka |
ONFL: Wey jirta xan ku saabsan faragelinta shirkeena ee madaxda dowlad deegaanka
Godey (NogobNews) 09/11/2019
Caddaani oo u warramayay weriyaha BBC-da ee magalaada Jigjiga Cabdinaasir sheekh Maxamed Xikam ayaa la weydiyay maadaama ay xeer hoosaadka ururka dib u geesi ku sameeyaan in meesha laga saari doono qodobkii ahaa in goblka Soomaalida ay Itoobiya gumeysato. Balse Cabdiqaadir ayaa ku jawaabay in Mabaadii’doodii aysan waxba iska bedeleyn.
”Si Nabad ah inaan dadka yaga u halganaan qaadanay, Itoobiya ayaana heshiiskaasi wadada galnay”.
”Ummadaha kaleba mabaadii’doodu wey wataan, waxay aaminsan yihiin wey wataan marka inaga kuwaa unbaan la mid nahay”, ayuu yiri Caddaani.
Afhayeenka oo ka jawaabayay su’aal kale oo ahayd in shirkooda ka socda magaalada Godey ay xubnaha ugu sareeyo xukuumadda deegaanka ay faraha kula jiraan ayaa sheegay in xan badan ay jirto balse aysan iyaga hayn wax cadeyn ah oo faragelintaasi ku saabsan.